IINGOMA EZINGAMA-52 ZEBACHELORETTE PARTY OZIFUNAYO KULUHLU LWAKHO LOKUDLALA - IMISITHO YAMAQELA
Eyona Imisitho Yamaqela Iingoma ezingama-52 zeBachelorette zePati eziya kuthi zenze ukuba impelaveki yakho ingalibaleki
Iingoma ezingama-52 zeBachelorette zePati eziya kuthi zenze ukuba impelaveki yakho ingalibaleki
Bamba i-aux kwaye ulungele ukuya ethekweni. NgoJacob Lund / Shutterstock.com Ukuhlaziywa kwe-Aug 03, 2020
Ukucwangcisa a Impelaveki yeqela le-bachelorette ? Emva Ukubhukisha i-Airbnb yakho kwaye ekugqibeleni ukugcina phezulu imihombiso , Uya kufuna ukwenza uluhlu lokudlala olufanelekileyo lweengoma zeqela le-bachelorette. Emva kwayo yonke loo nto, umculo udlala indima ebalulekileyo kuyo yonke eyakho imibhiyozo yomtshato , iqela le-bach libandakanyiwe. Nokuba i-bash yakho iya kwenzeka kwi EChicago , Dallas okanye kwenye indawo yamazwe aphesheya, ezi ngoma ziya kuseta imeko kulo naluphi na uhlobo lwebach party.
Ukuba wena neqela niyakube nilala echibini, ukuhlala kude kube sebusuku okanye nilungiselele ubusuku, ezi zimvo zengoma yepati ye-bachelorette ziya kuncedisa nawuphi na umsebenzi. Ukuyihambisa kwinqanaba elilandelayo, cinga ukuba wenze uluhlu lwakho lokudlalisa ukuze luthelekise umxholo weqela lakho ukuya kwiqela lakho. Ukusuka kwitshathi yelizwe-i-toppers ukuya kwi-nostalgic hits, ezi ngoma ziphezulu ze-bachelorette zeengoma ziya kugcina amandla ephezulu kuyo yonke iveki. Bhrawuza ukubona iingoma zeparty zethu ozithandayo apha, emva koko uqalise ngokwenza uluhlu lwakho lokudlala.
Iingoma eziphezulu zeBachelorette Party
Ilizwe Bachelorette Party Iingoma
Iingoma zeKaraoke Bachelorette Party
Iingoma zePop / Hip-Hop Bachelorette Party
Sebenzisa eli candelo kwiingoma ezingabonakali ziguga kwaye ugcine amandla aphezulu kwiminyhadala yemini. Obu buncwane bufanelekile ekuculeni nasekungqungqeni kuyo yonke imisebenzi yeempelaveki, kwiingoma zepati eziphezulu zonke iimfuno zombhiyozo.
Ukhetho loMhleli: UJennifer Lopez makhe siphakamise ilizwi lakhe. Ukuphela kweminyaka engama-90 kunesiphelo esifanelekileyo sokufumana wonke umntu ngeenyawo zakhe.
'Wannabe,' iziqholo zamantombazana
'SiSapho,' uDade Sledge
'Spice Ubomi Bakho,' Spice Girls
'Baleka ilizwe (Amantombazana),' Beyonce
'Jumpin', Jumpin ',' Umntwana omiselweyo
'Ndoda! Ndiziva Ndinjengomfazi, 'Shania Twain
'Abafazi abangatshatanga (Beka umsesane kuyo),' uBeyonce
'Amantombazana afuna nje ukonwaba,' uCyndi Lauper
'NguMdaniso nje,' u-Lady Gaga kunye noColby O'Donis
'Asinasiphako,' uBeyoncé kunye noChimamanda Ngozi Adichie
'ILady Marmalade,' uChristina Aguilera, uLil 'Kim, uMya kunye noP!
'Iqela elincinci alizange libulale mntu (konke esinako),' uFergie, GoonRock kunye noQ-Tip
Ukuba wena kunye nabahlobo bakho niyayixabisa iDolly encinci, umculo welizwe Lulongezo olumnandi kulo naluphi na uluhlu lokudlala lwe-bachelorette. Naphi na apho imibhiyozo yakho yenzeka khona, ezi ngoma zilungele amandla aphezulu kunye namaxesha apholileyo kwimpelaveki yonke.
Ukhetho loMhleli: 'Ayindithandi kangako,' uShania Twain. Isihlwele esithandayo siyonwabile kwaye siyadanisa, esenza ukuba wonke umntu afaneleke.
'9 kuye ku-5,' iDolly Parton
'Olu lwanga,' u-Faith Hill
'Ukubuyela umva,' igunya elidala
'Ulilizwe,' uJason Aldean
'Ii-80s iMercedes,' uMaren Morris
'Ilizwe leGolide,' uThomas Rhett
'Ihashe ePhakamileyo,' uKacey Musgraves
'Apha liqela,' uGretchen Wilson
'Ngobusuku bangoMgqibelo omnye,' uCole Swindell
`` Aba ngabantu bam, '' uRodney Atkins
'Intombazana yelizwe (Ndigungqisele yona),' uLuke Bryan
Uyawazi onke amagama kule jam, kwaye kubonakala ngathi aya kuba ngcono ngalo lonke ixesha ubamamela (ngakumbi ukuphoswa). Bamba imic (okanye ibrashi yeenwele) kwaye ubhinqe ezi ngoma zekaraoke bachelorette zepati ubusuku bonke.
Ukhetho loMhleli: UFergie kunye noLudacris bayamangalisa. Le ngoma ichaza impelaveki emnandi ezayo, ke lungela ukupela 'ubukhazikhazi' kwaye uphile obona bomi bakho ubalaseleyo neqela lakho.
'Akukho zikhukhuzayo,' iTLC
'Inyaniso Ibuhlungu,' uLizzo
'Ukudanisa uKumkanikazi,' u-ABBA
UTaylor Swift wathi, 'Yikhuphe.'
'Qalisa iqela,' P! Nk
'Intombazana yaseHollaback,' uGwen Stefani
'Umbrella,' uRihanna noJay Z
'Ndivakalelwa kukuba,' Amehlo amnyama ePeas
'Uphambene ngothando,' uBeyoncé noJay Z
'Genie kwiBhotile,' uChristina Aguilera
'Ndiyayithanda,' Icona Pop kunye noCharli XCX
Benze imbonakalo yabo kwirediyo, kwaye balungile kakhulu ukuba bangayihoyi ngelixa besenza uluhlu lwakho lokudlala lwe-bachelorette. Ezi ngoma ziya kugcina amanqanaba amandla aphezulu; Kwaye, kulula ukuba baqale iqela lokudanisa.
Ukhetho loMhleli: 'Savage Remix,' UMegan Thee Stallion kunye noBeyonce. Le nombolo ibetha kwiBillboard Hot 100 yigugu lokuziqhenya. Amanqaku ebhonasi ukuba abahlobo bakho banokubonisa intshukumo yabo yomdaniso weTikTok.
'Kulungile njengesihogo,' uLizzo
'Mnandi,' Mariah Carey
'Vuthulula iinwele zam,' UWELLOW
'Musa ukuqala ngoku,' uDua Lipa
'Intombazana entle,' uKeri Hilson
'Uxolo andixoli,' u-Demi Lovato
'Mna namantombazana am,' u-Selena Gomez
IHarry Styles, 'Ivatala yetyuwa.'
'Kufanelekile,' iFifth Harmony kunye ne-Kid Ink
'NgoLwesihlanu wokugqibela ebusuku (TGIF),' Katy Perry
'Elinye icala,' i-SZA kunye noJustin Timberlake
'Bang Bang,' uAriana Grande, uJessie J kunye noNicki Minaj
umsitho womtshato kwibhayibhile
Ixabisa malini umtshato ngokomyinge
iikhabhathi ezimhlophe zegranite emnyama
ring ring 6 mm